ငါတို့ကမ္ဘာမြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ငါတို့ကမ္ဘာမြေ
Posted by ငှက်ကလေး on Mar 25, 2013 in Drama, Essays.. | 8 comments
ချစ်သော ကမ္ဘာမြေ သီချင်း နဲ့
ထစ်ချုန်းမိုး သီချင်းတွေ နားထဲ ကြားယောင်လာတယ်။
အမှန်ပါပဲရှင်… ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်းစာတရား ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပေါ့..
ဘယ်လို ပြန်လည် ရှာဖွေရမလဲ.. မိုးပေါ်က ပြုတ်ကျမလာနိုင်လောက်ဘူး ထင်ရဲ့…
ရေးထားတဲ့ အရေးအသားကို သဘောကျမိပါတယ်ရှင်…
ဖယောင်းတိုင် မီးရဲ့အလင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တောက်ပပေမယ့် သူ့အတွက်တော့ ပူလောင်လွန်းလှပါတယ်။ ကိုလိုချင်တာရဖို့ သူတပါးရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို ထီမထင်ပြုတာ တရားပါ့မလား…
သူလဲ မနာပဲ ကိုလဲ သာမယ့် နေ့တစ်နေ့ အမြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်…
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေးသာ ရှိကြရင် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ အားလုံးအေးချမ်းသွားမှာပါ.
ဟုတ်တယ်နော်…. ကိုယ်၌ သူတစ်ပါးပြုစေလိုသည့်အတိုင်း သူတစ်ပါး၌ ပြုလော့….
ကောင်းကင်ယံမှ ငှက်ကလေး ယူလာပေးတဲ့…
ငါတို့ကမ္ဘာမြေ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွက် …..
ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ဆိုတဲ့ ….
မိုးသည်းကြီးကို ကမ္ဘာသူားများအားလုံး အားရပါးရ သောက်သုံးကြရပြီး ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ လောကကြီးအဖြစ်ကို အမြန်ဆုံးရောက်ရှိစေချင်ပါတယ်။ :hee:
လူတွေဟာလောဘ ဒေါသမောဟ မာန်မာနတွေ ကြီးမားပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ သူ့ထက်သူဆိုးရွားတဲ့ ကပ်ဘေးရောဂါတွေ ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲတွေ ကိုဖြစ်ပွားစေပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ အခြေခံလောကီတရားများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာ လောကကြီးကိုအေးချမ်းသာယာစေနိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။